Wafuud ka socota DKMG ah iyo Qaramada Midoobay oo Garoowe ka degay – SBC
Wafuud ka socota DKMG ah iyo Qaramada Midoobay oo Garoowe ka degay
Goor dhow Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Garoowe waxaa ka soo degay diyaarado siday Wafuud u badan beesha caalamka, gaar ahaan Qaramada Midoobay, kuwaasi oo ka qeyb galaya kulanka wada tashiga oo markii labaad ka furmaya maalinta berito ah magaalada garoowe.
Sida ay soo sheegayaan wariyayaasha SBC oo ku sugan garoonka diyaradaha ee Magaaladaas, waxaa iminka halkaasi ku sugan wafdi sare oo ay horkacayaan madaxda sar sare ee Puntland kuwaasi oo halkaas ku sugaya wafuuda DKMG ah oo la filayo in ay soo gaaraan magaalada Garoowe.
Dhinaca kale ilaa maalin nimadii shalay waxaa laga dareemayaa magaalada Garoowe Qaban qaabada lugta labaad ee Shirka wada tashiga ee magaalada Garoowe, waxaana siweyn loo diyaariyay goobihii loogu talagalay in lagu qabto kulankaas.
Waxii warar ah oo ku soo kordha kala soco wararkayaga xiga.
waxba kama qabo duminta qarankas